Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Hurricane Henry oo ku socda Koorsada Shilka ee New York
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Hurricane Henri ayaa ku sii jeeday New York horaantii Axadda. Roobabkii hore ayaa durba sababay daadad waaweyn habeenkii Big Apple Sabtidii. Tareenka dhulka hoostiisa mara iyo waddada ayaa weli taagan.
Duufaanta Henri ayaa bilowday inay ka gudubto waqooyi -bari subaxnimadii Axadda,
Roobab mahiigaan ah ayaa durba ku dhuftay deegaano badan, oo ka dhigay daan daad ah.
Dhulka la filayo ee Henri ee Long Island, New York ama koonfurta New England subaxnimadii Axadda ama galabtii hore ayaa la filayaa inuu fidinno ku fidin doono inta badan aagga ku xeeran.
Subaxnimadii Axadda markay ahayd 5.30 am EST, Henri wuxuu qiyaastii 120 mayl koonfur-bari ka xigay Montauk Point, New York, oo leh 75 mph dabaylo joogto ah, Xarunta Duufaanta Qaranka (NHC) sheegay. Waxay u socotay waqooyi qiyaastii 18 mph.
Digniinta duufaanku waxay saamaysay inta badan xeebta Long Island oo ay weheliyaan qaybo ka mid ah Connecticut iyo Massachusetts iyo Block Island.
Isku darka digniinaha iyo duufaannada duufaannada wata ayaa u yaal inta badan Long Island iyo xeebta Massachusetts.
Digniinta Duufaanta Duufaanku waxay u socotaa ... , iyo Block Island A Storm Surge Watch ayaa u hirgalay ... Long Island from Fire Island Inlet to Montauk Point * Xeebta Waqooyi ee Long Island laga bilaabo Port Jefferson Harbor ilaa Montauk Point * New Haven Connecticut ilaa galbeedka Westport Massachusetts galbeedka New Haven Connecticut * Xeebta koonfureed ee Long Island laga bilaabo galbeedka Fire Island Inlet ilaa East Rockaway Inlet * Westport Massachusetts ilaa Chatham Massachusetts, oo ay ku jiraan Vineyard Martha iyo Nantucket * Xeebta New York iyo New J Farshaxanka galbeed ee Rockaway Inlet ilaa Manasquan Inlet, oo ay ku jirto Magaalada New York Digniin Duufaan Duufaan ah waxay ka dhigan tahay inay jirto halis biyo-gelin halis ku ah nolosha, oo ka soo baxda biyaha ka soo qulqulaya gudaha xeebta. Si aad u muujiso meelaha halista ku jira, fadlan eeg Adeegga Cimilada Qaranka ee Dabaysha Duufaan/Digniin Digniin, oo laga heli karo hurricanes.gov. Tani waa xaalad nafta halis gelinaysa. Dadka ku nool aagaggaas waa inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay nafta iyo hantida uga ilaaliyaan biyaha kor u kacaya iyo suurtagalnimada xaalado kale oo khatar ah. Si degdeg ah u raac daad -gureynta iyo tilmaamaha kale ee ka imanaya saraakiisha deegaanka. Digniinta Duufaanka micnaheedu waa in xaaladaha duufaanta la filayo meel ka mid ah aagga digniinta. Digniinta Duufaanta Kulaylaha micnaheedu waa in xaaladaha duufaanka kulaylaha laga filayo meel ka mid ah aagga digniinta. Ilaalinta Duufaannada Duufaanku waxay ka dhigan tahay inay suurtogal tahay in daadad naf-gooyo ah, laga soo bilaabo kor u kaca biyaha ka soo qulqulaya gudaha xeebta. Si aad u muujiso meelaha halista ku jira, fadlan eeg Adeegga Cimilada Qaranka ee Dabaysha Duufaan/Digniin Digniin, oo laga heli karo hurricanes.gov. Danaha meelaha kale ee waqooyi -bari Mareykanka waa inay la socdaan horumarka Henri. Macluumaadka duufaanka ee gaarka u ah aaggaaga, oo ay ku jiraan saacadaha gudaha iyo digniinta suurtogalka ah, fadlan la soco alaabooyinka ay soo saartay xafiiska saadaasha Adeegga Cimilada Qaranka ee degaankaaga.
Xarunta tareenada ee Paris Gare du Nord ayaa laga daadgureeyay bam...
Tartanka Hadda ee ku habboonaanta Waqtiyadii Faafa kadib: IMEX ...
Cusboonaysiinta Cusub: Tusaha Daawashada Whale ee Kanada ayaa lagu ganaaxay $ 10,000